Askari ilaalo u ahaa xildhibaan dowlada fedaraaalka ayaaa maanta dil iyo dhaawac ka geystay agagaarka makalmukarama – Balcad.com Teyteyleey
Askari ilaalo u ahaa xildhibaan dowlada fedaraaalka ayaaa maanta dil iyo dhaawac ka geystay agagaarka makalmukarama
Askari la sheegay in ilaalo u ahaa Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta qof shacab ah ku dilay labo kalana ku dhaawacay Laamiga Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho.
Laamiga ayaa la sheegay in uu ahaa maanta mid saacado xirnaa ayna xayirmeen isku socodka gaadiidka xili uu halkaasi ka socday banaan bax, waxaana rasaas furay gaari la sheegay in uu lahaa Xildhibaan katirsan Baarlamaanka Somalia.
Rasaasta uu furay askariga ilaalada u ahaa Xildhibaanka oon wali magaciisa la sheegin ayaa waxaa ku dhintay hal qof oo shacab ah, waxaa sidoo kale rasaastaasi ku dhaawacmay labo qof oo kale.
Ciidamo kale oo katirsan dowlada Soomaaliya oo soo gaaray halka uu dilku ka dhacay ayaa gacanta ku dhigay askarigii dilka geestay iyo gaarigii uu la socday, waxaana la geeyay xarunta dambi baarista CID-da halkaas oo lagu baarayo.
Gaadiidka ay wataan Masuuliyiinta dowlada ayaa xabado kor u rida marka ay dareemaan in uu cariiri ka jiro laamiyada Muqdisho, waxaana rasaasta ay askarta ilaalada ah furaan mararka qaarkood ka dhasha khasaaro dhimasho iyo mid dhaawac.
The post Askari ilaalo u ahaa xildhibaan dowlada fedaraaalka ayaaa maanta dil iyo dhaawac ka geystay agagaarka makalmukarama appeared first on Ilwareed Online.
Gudoomiye Ku Xigenkii Hore ee Gobolka Bari oo La dilay